Ebanzi+Ingadi&Sauna: Ikhaya Leholide Scharendijke
Scharendijke, EC, i-Netherlands
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Marcus
I-bungalow ebanzi, enakekelwa kahle ngaphandle kwepaki yeholide, esendaweni yokuhlala ethule, eduze kwe-marina yase-Scharendijke kanye ne-Grevelingenmeer (ulwandle olunamanzi amnandi amakhulu kunawo wonke aseYurophu futhi edume ngokutshuza). Izindawo zokudlela, Barbershop, Isuphamakethe ene-cashpoint eduze. Ibanga eliya olwandle olusenyakatho cishe. Imizuzu engama-25 ngezinyawo nemizuzu emi-5 ngemoto.
Ngaphandle kwesakhiwo esikhulu (sicela ubheke uhlu lwezinsiza ukuze uthole imininingwane) Uzothola i-sauna nekhishi lokuwasha esakhiweni sesibili, esiphinde sinikezwe enye ishawa, indishi yokuwasha kanye neWC. Amabhayisikili amabili abantu abadala kanye ne-BBQ yamalahle akhona.
4.96(46 okushiwo abanye)
Kunoma imiphi imibuzo nezimfuno zezivakashi zami ngizofinyeleleka noma nini.
Hlola ezinye izinketho ezise- Scharendijke namaphethelo